गर्भनिरोधक चक्की सेवन गर्न छुट्यो ? नआतिनुस ! यस्तो छ सजिलो उपाय – Himal Post | Online News Revolution
गर्भनिरोधक चक्की सेवन गर्न छुट्यो ? नआतिनुस ! यस्तो छ सजिलो उपाय
himal post २०७४, १४ माघ २१:२३ January 29, 2018
काठमाडौं। जतिसुकै होसियारी अपनाए पनि दैनिक कार्य बोझ वा तनावका कारण मानिसहरु नियमित लिने गरेका औषधि सेवन गर्न भुल्छन् वा छुटाउछन् । जसका कारण पछि उनीहरु तनावमा आउँछन् ।
यो समस्या सबैभन्दा बढी माहिलाहरुलाई आइपर्दछ । श्रीमान श्रीमति सँगै भए यौन सम्पर्क नियमित प्रक्रिया हो तर सन्तानको आवश्यकता नरहेको बेला गर्भनिरोधक चक्की सेवन गर्न भुलेमा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
जबकी यो चक्की नियमित रुपमा सेवन गर्नुपर्छ भनिन्छ र मासिक धर्मको चक्र अनुरुप यसको मात्रा पनि निश्चित हुन्छ । यदि कुनै दिन गर्भनिरोधक चक्की सेवन गर्न भुलियो भने ? के गर्ने त ?
सजिलो उपाय यस्तो छ :
कतिपय चक्कीले एस्ट्रोजनको मात्रा घटाइदिन्छ, जसले टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ। पिलको सेवनले असामान्य रक्तश्राव समेत हुनसक्छ। यौनीमा जलन हुने । यीस्ट इन्फेक्सन हुने संभावना पनि रहन्छ।
उपत्यकामा मेलम्चीको पानि आउंदै, ३ सय मिटर सुरुङ मात्र बाँकी